सनसनिपूर्ण खुलासा आखिरि किन रुदै क्षमा मागे के.सि.ले ? « ETV Khabar
Published On :7August, 2018 9:25 pm
On : ब्यानर, समाज, स्वास्थ्य
भोक थाम्न सके, आँसु थाम्न सकेनन्
सहमतिको आठौं बुँदामा भएको सहमति अनुरुप मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गर्न सरकारलाई स्मरण गराए। चिकित्सा शिक्षा ऐन बाहेक कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको काम अघि बढाउन कार्यदल बनाउने तथा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नेलगायत सम्झौताका बाँकी ६ बुँदालाई समेत कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। बिसन्चो भएका कारण बिरामीको उपचारमा संलग्न हुन नसकेको उनले बताए। ‘अलि ठिक भयो भने एक दुईदिनपछि उपचारमा जुट्नु पर्ला’, डा. केसीले थपे।